Faa'iidooyinka Isticmaalka Barta Kiniiniga ee Nidaamyada Iibinta Dukaanka | Martech Zone
Talaado, September 29, 2015 Douglas Karr
Markay dukaamada tafaariiqdu ka fikiraan barta iibinta kiniiniga iibka, waxaa laga yaabaa inay si fudud uga fikirayaan beddelka POS, oo duug ah, duug ah oo ay iibsadeen toban sano ka hor. Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in kiniiniga POS uusan si fudud u xallin karin dhibaatada qarashka qalabka, sidoo kale waa aalad badan oo hagaajin karta khibradda wax iibsiga ee macaamiisha.
Barta mobilada ee qalabka iibka iyo warshadaha softiweerka cabirkoodu wuxuu ahaa $ 2 billion sanadkii 2013 - kaliya Waqooyiga Ameerika. Iyo 70% tafaariiqleyda ayaa tixgelinaya nidaamyada kiniiniga POS sababta oo ah cabirka shaashadooda, sahlanaanta isticmaalka iyo arrimo kale.
Qalabka POS ee loo yaqaan 'Tablet POS' maahan kaliya baaritaanka - waxaa loo isticmaali karaa howlo kala duwan oo dukaanka ku jira:
Ka shaqeynta lacag bixinta meel kasta oo ka mid ah dukaanka, ka takhalusida khadadka wax lagu iibsado.
Ka shaqeynta lacag bixinta meel kasta oo ka baxsan dukaanka, munaasabadaha iyo goobaha.
Soo celinta howsha si fudud oo fudud meel kasta oo dukaanka ah.
Raadinta alaabada iyo qiimeynta dukaanka oo dhan.
Barnaamijka aaminka marin u hel meel kasta, wakhti kasta.
Is-dhexgalka Ecommerce dukaankaaga internetka. Macaamilkaagu wuxuu ka bilaabi karaa iibka guriga, oo wuxuu ka soo qaadan karaa dukaanka tafaariiqda.
Sidii aan ku sheegnay qoraal hore, u fududaynta nidaamka iibka macaamiishaada mid fudud oo raaxo leh ayaa kordhin doonta iibka. Nidaamyada 'POS Tablet' ayaa fure u ah istiraatiijiyaddan.
Tags: faa'iidooyinkabluepaybarta iibkaPOSbarta kiniinka iibkakiniin pos
Soosaarida Mawduuca Dijital ah: Waa maxay alaabada dhamaadka
21, 2017 at 6: 10 PM
Dukaankayga waxaan ku dhex isticmaalaa livepos-ka waana waxtar badan hawl maalmeedkeena. Waxay ka dhigeysaa shaqadeena mid sahlan waxayna naga dhigeysaa waqti badan.
Feb 1, 2018 markay ahayd 5:34 PM
Waxaan isticmaaleynay livepos mudo labo sano ah hada sifooyinkooduna waxay naga caawiyeen inaan shaqadeena ka dhigno mid fudud. Aad ayey noo anfacaysaa oo lagu kalsoonaan karaa.